UMarina Dredging e-Fire Island Uqala kabusha Ukubuyisa Isiteshi Sokubuka iThala
Ukudilizwa Kwe-Fire Island Kuqala kabusha
Mashi 27, 2015
Abakwa-H & L Contracting baqale kabusha umsebenzi wokumba kabusha eWatch Hill eFire Island kuleli sonto, ngokusho kweNational Park Service.
I-dredge esetshenziselwe le phrojekthi iyi-Ellicott 1170 Dragon® ukwehla. Le projekthi, okuhloswe ngayo ukugcina ukufinyelela okuphephile, komphakathi kokuya eziteshini zasolwandle nezamadokodo okuthintwa iSiphepho uSandy, kwakhunjulwa ekuqaleni kukaJanuwari ngenxa yesimo sezulu sasebusika esibi neqhwa elikhulu eGreat South Bay.
Imizamo yokudonsela phansi izogxila ekubuyiseni isiteshi sokuhamba se-Watch Hill futhi sizoqhubeka ngoMashi 31. Ngenxa yokubambezeleka kwesimo sezulu, izingxenye zephrojekthi ngeke zisakwazi ukuqedwa ngesikhathi sokukhipha amawindi futhi zingaqedwa kusuka ngo-Okthoba, 2015 kuya kuJanuwari, 2016.
Iphrojekthi yokudicilela phansi kabusha yaqala ngoDisemba, i-2014 futhi yamiswa ngoJanuwari 8, 2015 ngenxa yokuma kwe-icing eGreat South Bay.
Iphrojekthi eyizigidi ezingama- $ 2.9, exhaswe ngosizo lweSiphepho iSandy, yayenzelwe ukubuyisela iziteshi zokuzulazula zeSailors Haven kanye neWatch Hill kububanzi obungamamitha ayi-100 nokujula kwamamitha ayisithupha kulwandle olunamandla aphansi.